power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Hardware Problems » power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem]
1 power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem] on 2nd November 2010, 6:29 pm
ကျွန်တော်.ကွန်ပြုတာလေး Motherboard ရော Memory ရော ကြွသွားပါတယ် ခင်ဗျ။ အသစ်ဝယ်ပြီးလဲလိုက်တာ Power button မှာပဲ မီးလင်းပြီး power supply မှာ fan မလည်တော.ဘူးဗျ ။ ကုစားပေးကြပါ ဆရာကြီးများခင်ဗျ။။။။။ လည်နေလို.ဗျ power supply ကြောင်. MotherBoard ကြွနီူင်သလား?
Memory ရောကြွနိူင်သလား? ပြောပြပေးကြပါခင်ဗျ။
Last edited by Fox on 6th August 2011, 2:07 am; edited3times in total (Reason for editing : Tag)
2 Re: power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem] on 3rd November 2010, 4:41 pm
motherboard နဲ့ memory ကြွသွားမှန်းဘယ်လိုသိပါသလဲ။power supply ကကောဘယ်လောက်watt သုံးထားပါသလဲ။
3 Re: power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem] on 3rd November 2010, 9:36 pm
Power Supply ကြောင့် Motherboard လောင်နိုင်ပါတယ် အဲဒီအတွက် အပေါ်က ကို thihawm မေးထားသလိုပါပဲ
Watt ကို သေချာကြည့်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် Watt များနေတဲ့ supply မျိုးဆို သတိသာထားပေတော့ တတ်သမျှ အကုန်လောင်မှာပဲ ..
4 Re: power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem] on 4th November 2010, 11:33 am
500 watt သုံးထားပါတယ် ................Motherboard and Memory ကြွတာသေချာသွားပါတယ်ခင်ဗျ။ အသစ်လည်းလိုက်တော. ကောင်းသွားပါတယ် ဒါပေမယ်. window တက်ပြီးရင် တစ်ချက်တစ်ချက် ပြန်ပြီး ပိတ်သွားတယ်ဗျ ......ပြီးတော.CPU fan လည်တ.ဲအသံကလည်းတော်တော်ကျယ်တယ်ဗျ။ အန္တရယ်ရှိနိုင်လားခင်ဗျ။ ပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူး။။။။။။။။။
5 Re: power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem] on 9th November 2010, 5:14 pm
power supply အဝင်မှာ ကွန်နစာ နှစ်လုံးပါတယ် အကို အဲကောင်လစ်သွားတာဖြစ်မယ် အကိုပြောတာက
motherboard ပျက်တယ်ဆိုလို့ပါ အဲ နှစ်လုံးကို volt များတာလဲလိုက်ပါကောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
6 Re: power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem] on 10th November 2010, 11:01 am
CPU fan ရဲ့အသံအရမ်းကျယ်တယ်ဆိုတာfanအရမ်းလည်နေလို့ပါwindow တက်ပြီးရင်ပိတ််သွားတယ်ဆိုတာ
7 Re: power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem] on 15th November 2010, 3:35 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-07-29
power supply ကြောင့်ကြွကုန်တာဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီ power supply ကိုဆက်ပြီးမသုံးသင့်ဘူးထင်ပါတယ်
သုံမယ်ဆိုလဲ အထွက် ဗို ့အားတွေကိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ် သတ်မှတ်ဗို ့အားတွေမှန်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်သုံးပေါ့
မမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် ၀ယ်တပ်ထားတာလေးတွေ ထပ်ပါသွားနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တာ်ဆိုရင် တိုင်းကြည့်ရုံနဲ ့တောင်စိတ်မချပါဘူး ကိုယ်တိုင်းနေတုန်းကအမှန် သုံးတော့မှထဖောက်ရင်ခက်ကပီ
power supply ကစက်တစ်လုံးမှာတော်တော်အရေးကြီးပါတယ် ပိုက်ပိုက်တွေကိုအဲ့ကောင်ကဖြုန်းပစ်နိုင်တယ်လေ
ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ပါ၀ါဆပ်ပလိုင်း ဟာ ၀ပ်ဘယ်လောက်ကြီးကြီး သူကထုတ်ပေးထားတဲ့ သူ ့ရဲ ့သတ်မှတ်ဗို ့အားမှာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ ဘယ်ဟတ်ဝဲကိုမဆို ကောင်းကောင်းထောက်ပန် ့ပေးနိုင်ပါတယ် သူ ့ရဲဝပ်ထက်မကြီးတဲ့ဟာဆိုရင်ပေါ့ သူဝပ်ထက်ကြီးတဲ့ဟာလာတပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူကြွသွားမှာပါ
စက်တစ်လုံးမှာ ပါ၀ါဆပ်ပလိုင်းကြောင့် လောင်တယ်ဆိုတာ ၀ပ်အားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး
ဗို ့အားလွန်ချင်းကြောင့်ပါ နောက်တစ်ခုက အေစီယိုစီးမှု ့ကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်
8 Re: power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem] on 17th November 2010, 2:15 pm
အကိုရေမှားရင်လဲပြောပါနော်၊ သူကအေစီတောမထွက်ဘူးဗျ ဘာလို့လောဆိုတော ဒိုင်အုပ်နဲကွန်နစာ ခွလိုက်ရင်DC ဖြစ်တာဘဲ ဒါဘေမဲ 7812 IC ဆိုရင် သူက၁၂ V ဘဲ ထုပ်ပေးတယ်သူလစ်သွားရင်ဗို့များလာမယ်အဲဒါဖြစ်နိုင်တပ်ထင် တယ်။ ဒါဘေမဲ ကြားဖူးတာတော power good signal ရမှအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာတောနဲနဲသိတယ် ။hardware တွေရဲ v သပ်မှတ်ချက်ကို bios ကလုပ်တယ်လို့လဲးကြားဖူးပါတယ်။ပြောတာဆိုင်လားမဆိုင်လားတောမသိပါဘူး။
ပါ၀ါဆပ်ပလိုင်းကစျေးသိပ်မကြီးပါဘူး ပညာရပ်အနေနဲ ပြောကြည့်တာပါနော်။ စိတ်တောမဆိုး နဲနော်။
9 Re: power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem] on 25th November 2010, 7:16 am
ကျွန်တော် စမ်းကြည်.သလောက်တော. ကွန်ပြူတာ power supply မှာ pin ၂ pin ကို ဇကနာနဲ.ပူးပြီး တော. စမ်းကြည့်လို့ရတယ် ။ ကျွန်တော် အရောင်မေ.နေလို. ဟီးဟီး ။။။ ကျွန်တော်.စက်ကောင်းသွားပါပြီ အလုံးလိုက်လဲလိုက်တာလေ.........
10 Re: power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem] on 7th December 2010, 8:44 pm
ဆက်မော် wrote: ကျွန်တော် စမ်းကြည်.သလောက်တော. ကွန်ပြူတာ power supply မှာ pin ၂ pin ကို ဇကနာနဲ.ပူးပြီး တော. စမ်းကြည့်လို့ရတယ် ။ ကျွန်တော် အရောင်မေ.နေလို. ဟီးဟီး ။။။ ကျွန်တော်.စက်ကောင်းသွားပါပြီ အလုံးလိုက်လဲလိုက်တာလေ.........
အစိမ်းရောင်(PS-ON) နဲ့ အနက်ရောင်(Ground) ပါ။
11 Re: power supply fan မလည်တော့လို့ [Problem]